Xal laga gaaray khilaafkii Guddoonka labada Aqal - Awdinle Online
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu soo geba gabeeynayay xalka gaarista khilaaf u dhaxeeyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi.
Kulanka oo uu goobjoog ka ahaa Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu dhameeyay khilaafkii ka dhaxeeyay labada Guddoomiye iyo sidoo kale khilaafkii ka dhashay Arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare.
Xalka gaarista khilaafkaan oo meesha ka saaray kaalintii doorashooyinka ee Golaha Aqalka Sare ayaa waxaa gacan weyn ka geystay Madaxda Dowlad Goboleedyada oo maalmahaan ku sugan Magaalada Muqdisho.
Heshiiskii doorashada oo ay wada gaareen Madaxweyne Farmaajo, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa la filayaa in Maalinta Sabtida ah la horgeeyo kulan wadajir ah oo ay yeelanayaan Xildhibaannada labada Aqal.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo diiday dalab uga yimid Guddoomiyaha Baarlamaanka
Next articleFarmaajo oo la kulmay Dowlad Goboleedyada iyo Guddoonka…